WestJet inowedzera kumiswa kweMexico neCaribbean nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet inowedzera kumiswa kweMexico neCaribbean nendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Caribbean • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
WestJet inowedzera kusimudzira kwezuva-kubhururuka kusvika June 4, 2021
WestJet inoramba yakanangana nemhinduro yenguva refu iyo ichabatsira zvakanakira maCanada
WestJet inoenderera mberi ichitsigira kutsiviwa kwekumanikidzwa kwehotera nekuisa hutongi
Vashanyi vane mafambiro akanganiswa vanozoziviswa nekukanzurwa
WestJet nhasi yazivisa kuti ichawedzera kumiswa kwayo kwenguva pfupi kwendege dzenyika dzepasi rese kuenda kunzvimbo dziri kuMexico ne Caribbean kusvika June 4, 2021.
"Tiri kuwedzera kumiswa kwedu netarisiro yakajeka yekuti vazhinji veCanada vabaiwa jekiseni, mutemo wehurumende uchachinja," akadaro Ed Sims, WestJet Mutungamiri uye CEO. “Tiri kuramba tichikurudzira kuti nzvimbo dzekugara dzavanofanirwa kugara kwavo voga dzigadziriswe nehutongi hwehutongi hwakaenzana uye hunoenderana nepasi rose pazvinhu zvese zvinopinda munyika medu. Pamwe chete nekukurumidza uye kwakabudirira kubviswa kwejekiseni, shanduko yemutemo iyi ichatsigira kutangazve kwekufamba uye kubatsira kusimudzira hupfumi hweCanada, uko basa rimwe chete pagumi rine chekuita nekushanya. ”
Vashanyi vane mafambiro akanganiswa vanozoziviswa nekukanzurwa. Kubva munaNovember 1, 2020, WestJet yanga ichipa mari dzekudzosera vafambi vese, zvisinei nekirasi yebhazi yakanyoreswa uko WestJet yakatanga kudzima.
"Isu tinoramba takanangana nemhinduro yenguva refu iyo ichabatsira zvakanakira maCanada," akaenderera mberi Sims. "Nzira yakachengeteka yekutangazve kufamba ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekutsigira izvo zvido uye kudzorera mabasa."